प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - क्वानजाउ नयाँ हन्टर बैगहरू र लगेज कं, लिमिटेड
तपाईं कारखाना वा ट्रेडिंग कम्पनी हो?
हामी दुबै लाइनहरु pls को साथ कारखाना हो! हामी पनि हाम्रो आफ्नै ट्रेडिंग डिपार्ट्स छ! यस अवस्थामा, हामी कुशलताका साथ काम गर्न सक्दछौं हाम्रा ग्राहकहरु लाई गलतफहमीको बिना।
के म नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
यदि तपाईं नमूना चाहानुहुन्छ भने हामीसँग हाम्रो कम्पनीमा छ भने, यो नि: शुल्क हुन सक्छ र फ्रेट तपाईंलाई पनि वहन गर्न सकिन्छ।
यदि नमूना तपाईको डिजाईन आदिको आधारमा विकसित हुनुपर्दछ, हामी सामग्री लागत आदि जाँच गर्नेछौं र तपाईलाई सूचित गर्नेछौं, यदि ती सामग्रीहरू हामीसँग पहिले नै कारखानामा रहेको छ भने, नमूना सामान्य रूपमा निःशुल्क हुन सक्दछ। यदि सामग्री विशेष छ र धेरै चार्ज गरिएको छ भने, यस मामलामा, हामी तपाईंलाई नमूना शुल्कहरू कसरी राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने भनेर हेर्नको लागि हामीसँग कुरा गर्नेछौं।
नमूनाको लागि नेतृत्व समय के हो?
सामान्यतया 7-10 दिन तपाईले राख्नु भएको शैलीको आधारमा।
प्रत्येक प्रकारको झोला (नमूनाका लागि / थोक उत्पादनको लागि) गुणस्तर नियन्त्रण गर्न तपाई के गर्नुहुन्छ?
क) नमूनाका लागि: * विस्तृत कागज ढाँचा जाँच गर्दै; * फेब्रिक खोजी र डिजाइन फिट गर्न ट्रिम; * परीक्षण सिलाई विधिहरू; * टोलीसँग अन्तिम नमूनाको जाँच गर्दै ग्राहकहरूलाई पठाउनु अघि केही पनि सुधारिएको छ कि छैन भनेर हेर्न।
* बैग फिजिकल प्रदर्शनमा मात्र रासायनिक कम्पोनेन्ट विश्लेषण मात्र हाम्रो ग्राहकहरूको बजारमा आधारित परीक्षण मानक फिक्सिंग, हाम्रो अन्तिम अनुमोदनको लागि हाम्रो ग्राहकलाई सूचित गर्दै
b) थोक productiton आदेशहरूका लागि: नमूना चरणमा अपरेशनको आधारमा, सबै विवरण र प्रश्नहरू सामान्य रूपमा ग्राहकहरू र हामी द्वारा व्यवस्थित गरियो। हामी उत्पादन योजनाको अनुसरण गर्नेछौं सुनिश्चित गर्नका लागि थोक उत्पादन समयमै प्रभावकारी हुनेछ! उत्पादनको अवधिमा, यदि कुनै घटना भएमा, हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूसँग निश्चित गर्न वा पहिले नै समस्या समाधान गर्न समय छ भनेर निश्चित गर्न अग्रिम सूचित गर्नेछौं।
तपाईंसँग प्रत्येक सीजन प्रदान गर्न क्याटलोग छ?
हो, हामीसँग हाम्रो आफ्नै डिजाइनर छ, हामी फेसन ट्रेंडी पूरा गर्न प्रत्येक मौसममा विभिन्न प्रकारका झोलाहरू डिजाइन र विकास गर्छौं।
प्रत्येक आधा बर्ष भित्र क्याटलोग विभिन्न प्रकारका झोला भित्र। pls हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई हाम्रो e-cateloog आवश्यक छ।
कसरी गर्ने यदि म तपाईंको MOQ मा पुग्न सक्दिन?
हामीसँग तपाईंको सन्दर्भको लागि सुझाव दिन विभिन्न प्रकारका विधिहरू छन्। हामी आशा गर्दछौं कि कुनै पनि अर्डरमा स्थानान्तरण गर्न तपाईले धेरै मद्दत गर्ने तरिका सोच्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी: सामान्यतया तपाईले हाम्रो MOQ पूरा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कारण तपाईको आफ्नै डिजाईन छ तर हामीलाई कपडा र ट्रिमहरू बुक गर्न MOQ पुग्न सक्नुहुन्न। यदि त्यस्तो अवस्थामा हो भने हामी केही समान कपडा वा ट्रिम हेर्न सुझाव दिनेछौं। यदि यो तपाईंलाई राम्रोसँग भेट्न सक्दछ। वा, यदि तपाईंको मात्रा केहि केहि टुक्रा -०-p० पीसी हो भने, हामी हाम्रो स्टक सुझाव दिन्छौं, जुन राम्रो गुणको साथ पनि छ तर तर्कसंगत मूल्य, प्रति सीजन फेसन देखा पर्नेछ। हामीसँग तपाईको पेशेवर प्रबन्धक छनौट गर्न हामीसँग तपाईको इ-मेल पाउँदा पछि केहि प्रकारका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्न।
के तपाईं ग्राहक्राईज्ड लोगो गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, प्रत्येक वर्ष हामी विभिन्न प्रकारका बैगहरू विकास गर्दछौं। धेरै ग्राहकले हाम्रो झोला डिजाइन चयन गर्न सक्दछन् तर उनीहरूको लोगो अनुकूलित गर्दछ जुन हामी सँधै काम गरिरहेका छौं।
तपाइँ कस्तो प्रकारको भुक्तानी सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
जम्मा टी / टी। डी / पी डी / एक वेस्टर्न यूनियन पेपैल यो छलफल गर्न सकिन्छ।
उत्पादनहरु को लागी तपाईको वारेन्टी के हो?
हामीसँग कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली छ, र तपाइँसँग सम्पर्क राख्न पेशेवर टेक्शियन छ, तपाइँको बिक्री पछि तथ्या collecting्क स collecting्कलन गर्न, यस अवस्थामा हामी अझ राम्ररी बुझ्न सक्दछौं कि कुन पक्षहरू हामी अझै पनि बलियो छौं र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं, र कुन पक्ष हामीलाई अझै चाहिन्छ। सुधार हामी कुनै पनि समस्या र बिक्री पछि समस्या सामना गर्नेछौं एक पटक तपाईं हामी संग सम्पर्क गरेपछि, कुनै जोखिम बिक्री पछि।